Mijoro Hiaro Ilay Hazo Oak 600 Taona i Serbia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Jolay 2013 13:43 GMT
Vakio amin'ny teny Español, македонски, Français, polski, বাংলা, Italiano, 日本語, English
Nolazain'ny vaovao tamin'ny faran'ny volana Jona 2013 ny fampisamborana 340 tapitrisa euros [eo ho eo amin'ny 435 tapitrisa dolara Amerikana ] sy 700 tapitrisa euros [ 895 tapitrisa dolara Amerikana ] hanamboarana ny Corridor 11, ampahany stratejika amin'ilay làlambe efa nandrasana ela manavatsava an'i Serbia afovoany.
Vetivety foana dia fantatry ny Serba fa hanitsy hanavatsava ny toerana misy ilay hazo oak 600 taona ao amin'ny tanànan'i Savinac akaikin'i Gornji Milanovac ilay làlambe. Haingana araka izany koa ny hetsika fanoherana nataon'ny olona, fitsipahana tao amin'ny tambajotra sosialy sy fikarakarana hetsi-panoherana tany Savinac ary tety anaty aterineto.
Ankoatra ny maha-zava-mahaliana voajanahary sy ny hevitra entiny ara-tantara, dia misy ihany koa finoana Serba hoe raha tapahana io hazo Oak io dia hisy zava-doza hiseho, mety ho fahafatesana. Ireo zokiolona any ambanivohitr'i Serbia dia miteny fa tena hajaina ary tsy azo atao kilalao io hazo io. Raha fantatry ny solontenam-panjakana sy ireo tompon'andraikitra amin'ny fanamboarana io làlambe io fa tafiditra ao anatin'ny làlana lalovan'ny Corridor 11 io hazo oak io, dia angamba ho nikaroka vahaolana hafa izy ireo, fa araka ny nambaran'i Velimir Ilić, Minisitry ny Tanàn-dehibe sy ny Fananganana, dia ” tsy voatarika mialoha ho amin'izany ny sainy”.
Niboiboika tao amin'ny tambajotra sosialy any Serbia ireo hafatra an-jatony milaza fanoherana avy amin'ny mponina tamin'ny alalan'ny tenifototra #hrast (#oak) tao amin'ny Twitter sy Facebook.
“Matoky ny hrast [oak] izahay” io no teny notazonin'ny maro tamin'ny hetsi-panoherana tany manohitra Savinac sy nozaraina tamin'ny tambajotra sosialy. Sary avy amin'ny Ivontoerana ho amin'ny Vondrom-piarahamonina Maharitra – Pejy Facebook Serbia .
Haingana ny setry nataon'ny Minisitra Ilić an'ilay hiaka izay nanomboka tao amin'ny tambajotra sosialy ary nanerana ny haino aman-jery tany Serbia manohitra ny fanapahana ilay hazo oak. Nambarany fa hikaroka vahaolana [sr] izy mba hamindràna ilay hazo 600 taona, mirefy 40 metatra, 7,5 metatra ny savaivony any amin'ny toeran-kafa. Nisy mpandefa Telegrafy tabloida amin'ny aterineto izay nanontany ny momba io vahaolana io sy niresaka tamin'ny manam-pahaizana manokana momba io :
Asa be, mampiasa olona maro, fitaovana mifanaraka amin'izany, mila toerana malalaka ny famindrana tsy misy tomika io hazo oak io amin'izao habeny izao. An-taratasy dia azo atao izany raha heverina, saingy tsy misy manana izany traikefa izany, noho izany mino aho fa ny famindràna ity hazo ity no fara androny. Tsy misy dikany izany. Ao amin'ny firenena iray izay manaja ny fanànany, dia tafiditra ao amin'ny fanajariana ny tontolony ny hazo tahaka itony – hoy ny mpahalala momba ny zava-maniry [Olja] Vasić.
Raha mbola mikaroka vahaolana ireo minisitra sy ireo manam-pahefana ao amin'ny governemata, dia nitokona nanodidina ilay hazo ao Savinac kosa ny mponina. Ny andro faramparany tamin'ny volan Jona dia nanomboka nitangorona manodidina ilay hazo ny mponina ho fanavotana azy, nanaevin-daharana azy sy nitarika ilay Poeta Serba Dobrica Erić, izay avy ao amin'io faritra io, sy ireo fikambanana tsy miankina amin'ny fanjakana toy ny “Green of Serbia” (Maitson'i Serbia), tao amin'ilay hetsika atao hoe : ” Tsy Azo Azera Ny Oak”.
Mivory manodidina ilay hazo oak 600 taona any Savinac ireo mpomba ny “Green of Serbia”. Sary avy amin'ny Ivontoerana ho amin'ny Vondrom-piarahamonina Maharitra – pejy Facebook Serbia.
Naharitra hatramin'ny faran'ny herinandro voalohany tamin'ny volana Jolay 2013 ilay fihetsiketsehana. Nisy fivoriana natao tao amin'ny Ministeran'ny Tanàn-dehibe sy ny Fananganana sy tao amin'ny kabinetran'ny Piraiminisitra Ivica Dačić mba hiadiana hevitra ny amin'io olana io, rehefa izany dia nanao fanambaràna ny Minisitra Ilić ny 9 Jolay fa harovana ilay hazo oak. Araka ny nitateran'i tabloida Kurir mpiseho isanandro azy :
“Hosarahana tanteraka amin'ny alàlan'ny andry voarafitra amin'ny simenitra sy ny vatokely ‘beton armé’ ny tara, mba tsy hifanimba ny fakany sy ny tara. Amin'izay fotoana izay dia ho voasakana ny loza mety hihatra amin'ilay làlambe” hoy i Ilić .
Samy zava-dehibe ho an'i Serbia na ny làlambe na ilay hazo oak, izay efa naharitra taonjato maro noho ny firenena sasany. Na dia mampanantena vahaolana maro ilaina ho anà faritra iray izay maro orinasa mikasika ny fambolena sy indostrialy aza ilay làlambe dia naneho ny tsy fahavononany hanao sorona an'ity hazo ity ny Serba.
Notantarain'i Zoran Sokić, mpitoraka bilaogy, ny fahazazany tany an-tendrombohitra rakotra ala-nà Oak tany afovoan'i Serbia , raha niteny ilay hazo oak mampifanjevo an'i Serbia izy, ary namafisiny ny maha-zava-dehibe ny hazo anankitelo izay mampiavaka ny fahazazany sy ny fahalebiazany sady nofaranany hoe :
Azoko lazaina tsora fa, ao amin'ny tanàna nahaterahako, izay lehilahy manorina làlambe dia halaza sady ho voarakitra ao anaty slavas [ fankalazana ny fianakaviana masina ao amin'ny Kristiana Ortodoksa Serba] ary hatrany anaty fihaonana any amin'ireo kafe any an-toerana aorian'ny fiotazana vokatra voaroy, mandritra ny taonjato folo manaraka eo fara-fahakeliny. Mitovitovy fahanterana amin'ilay oak any Savinac ihany ny fahelan'ny tantara any an-toerana, tampin-dalan-kaleha isika, hoe tsy navelan'ny kaominista holalovan'ny làlamby teo satria faritry ny Chetniks, hoe mahazo alàlana hifindra ireo tanorantsika raha mbola tsy tonga ny làlambe- miombon-kevitra amin'izany aho. Fa amin'ny lafiny iray, tsy omeko ny hazoko anankitelo, na ho takalonà làlambe anankitelo na ho anà lalamby anankitelo.